Jananinepal.comकेन्द्र र प्रदेश सरकार असक्षम हुँदा स्थानीय तहलाइ समस्या : भरत शर्मा गैरे, मेयर गल्कोट नगरपालिका - Jananinepal.com
१) गल्कोट नगरपालिकामा कोरोना भाइरस को अवस्था के कस्तो छ?
-हामिसँग अहिले ३ जनामा संक्रमण देखिएको छ ।४७ जनाको पिसिआर गरिएकोमा तीन जनामा पोजेटिभ र बाँकी नेगेटिभ आयो ।नेगेटिभ आएकाहरुलाई पनि होम क्वारेन्टाइनमा बस्न भनी घर पठाएका छौँ । आजको मितिसम्म गल्कोटका १० वडा भित्र रहेका क्वारेन्टाइनमा १७१ जना रहेका छन । उनिहरु मध्ये ८० जनाको स्वाब कलेक्ट गरि पोखरा पठाइएको हो । तर अहिलेसम्म पनि रिजल्ट नहुदा क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुलाइ निकै पीडा भएको मैले मानेको छु । अझै करिब एक सयको परिक्षण गर्न भिटिएम कीट आफैले खरिद गर्यौ । ७१ जनाको स्वाव लिएर पठाउने तयारी गर्दै छौ । उनिहरुको रिपोर्ट कहिले आउने हो थाहा छैन । हामिलाइ समयमै नतिजा नआउदा गाह्रो भैरहेको छ ।
२) भारत लगायतका ठाउँबाट आउनुभएका र आउन चाहनेहरुलाइ कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो?
-हामिले भारत बाट आउन चाहनेलाइ निशुल्क आउने व्यवस्था गरेका छौँ । सुनौली नाकाबाट ५ गाडिमा निशुल्क रुपमा नागरिकहरुलाइ ल्याएर क्वारेन्टाइममा राखेका छौ ।
अझै पनि आउन चाहने नागरिकलाइ हामी जुनसुकै माध्यम प्रयोग गरेर भएपनी स्वदेश ल्याउछौ ।
३) क्वारेन्टाइनमा सेवासुविधाको विषयमा धेरै प्रश्न उठिरहेको छ नि?
– यो कुरा एकदम सत्य हो । हाम्रो नगरपालिकामा भित्रमा रहेका क्वारेन्टाइनमा सेवा सुविधा दिन अधिकतम प्रयास हामिले गरेका छौ । हामी दिनरात काम गरिरहेका छौ । क्वारेन्टाइनको म्याक्सिमम क्राइटेरिया पूरा गर्न केन्द्र र प्रदेशले पनि नसकेको अवस्थामा हामी त्यसमा अव्वल रहन सक्ने अवस्था रहदैन । तैपनी मिनिमम फेसिलिटी पुराएका छौ र नागरिक पनि जेनतेन सम्हालिएर बस्नुभएको छ । अहिले क्वारेन्टाइनमा बढिमा तिस जनाका दरले राखेका छौ । त्यहा बेसिक सुविधा पनि पुर्याइएको छ ।
४) स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन, राहत आदिमा नगरपालिकाले के के गर्यो?
-हामीले लकडाउनले प्रत्यक्ष प्रभाव परेका १७५८ घर परिवारलाइ प्रतिव्यक्ति करिब २५ सय बराबरको राहत बाडिसकेका छौँ । त्यसै गरि जनताले पनि स्वतस्फूर्त रुपमा राहत सामग्री हरु, स्यानिटाइजर , मास्क सहयोग गर्नुभयो । हामीले पनि घर घरम पुगेर सेनिटाइजर र मास्क बितरण गर्ने प्रयास गरेका छौ । अब हामी एक दुई हप्तामा हामीले १२ बेड क्षमता भएको आइसोलेसन बनाउदै छौ । जसका लागि पोखराबाट बेड लगायतका पुर्वाधार्क हरु किन्दै छौ । त्यसैगरी औषधि , स्वास्थ्यकर्मी लाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री अर्थात पिपिइ पनि खरिद हुन्छ । आजसम्म बिरामीहरु बाग्लुङ पठाउदा त्यहको आइसोलेसन ले धान्ने देखिएन । त्यसैले एक हप्तामा आइसोलेसन यहि तयार गरिसक्छौ ।
५) यो अवस्थामा प्राइभेट स्वास्थ्यसंस्थाको सहयोग कस्तो छ?
-यो अत्यन्त संवेदनशिल विषय हो । हामीलाइ निजि तहबाट पनि सहयोग छ । महामारीको सवै जिम्मा र अधिकार केन्द्र सरकारलाइ हुने कानुनी प्रबन्ध हुँदा निजि तहलाइ खटाउन स्थानीय तहलाइ गाह्रो हुन्छ । यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाइ हौसला दिने काम गरेर काम गरेका छौ ।
६) महामारी नियन्त्रण बाहिर जान नदिन के प्रयास गर्नुभएको छ?
-सुरुमा बिदेश बाट आउनुभएका हरुलाइ खोजेर क्वारेन्टाइन मा राख्ने र कन्ट्याक्ट् ट्रेसिङ्गको काम गरेका थियौ । अहिले सबैलाइ क्वारेन्टाइन मा राखेका छौ र सबैको अनिवार्य पिसिआर गरेर मात्र घर पठाएका छौ र घर पनि होम आइसोलेसनमा बस्न भनेका छौ र अनुगमन पनि गरेका छौ ।
७) अब लकडाउनका कुरा गरौ , गल्कोट नगरपालिका भित्र लकडाउन कसरी पालना भएको छ? अब खुकुलो बनाउने योजना के छ?
– यहाँ नीर निकै गाह्रो छ । सुरुमा लकडाउन गर्न खास्सै आवश्यक थिएन किनकी संक्रमित कम थिए । अहिले संक्रमित दिन दुई गुणा रात चार गुणाका दरले अघि बढ्दा लकडाउन खुकुलो बनाउन पर्नु चिन्ताको कुरा हो । सधै लकडाउन गरेरमात्र जिविका चल्दैन । लकडाउन गर्ने भनेको केही समयको लागि हो र यो समयमा आवश्यक तयारी गर्ने टाइम हो । तर त्यसो भएन । यस मामलामा केन्द्र र प्रदेश सरकार असक्षम जस्तै भए । सबै काम स्थानीय तहलाइ थोपरेर आफू जिम्मेवारी बाट पन्छिन खोजेजस्तै गरेका छन् । समयमै इन्डिया लगायतका ठाउबाट जनता ल्याउन नसक्नु नै अहिलेको अवस्थाको कारक हो । केन्द्र र प्रदेशले समयमै यो काम्व गरेको भए अहिले लकडाउन खुकुलो बनाउन ठिक हुन्थ्यो । तर त्यसो नहुदा नहुदै र संक्रमण बढ्दै जाँदा पनि केन्द्रको नियम पालना गर्दै लकडाउन खुकुलो गराएका छौ । केन्द्रले एउटा कुरा गर्ने, हामीले कडा गर्न खोजे जनताले नै अवज्ञा गर्छन् । लकडाउन पुर्ण समाधान हैन । जनता आफै सचेत भएर सामजिक दुरि पालना गरेर अगाडि बढेमा समस्या त्यत्ती धेरै सायद हुदैन । सुरुमा लक्डाउन पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन भयो । तर हामीलाइ एउटा समस्या भने के भो भने मध्यपहाडी लोक मार्ग यहि बाट गएको हुँदा नाका बन्द गर्न सक्ने कुरै भएन । समस्या त्यही नै हो । नभए लकडाउन राम्रै पालना भएको हो । अहिले जनता पनि सचेत भएर अघि बढ्नुभएको मलाइ लाग्छ ।
८) यो महामारीले गल्कोटलाइ सिकाएको पाठ के हो?
-यस्ले हामीलाइ धेरै कुरा सिकायो । सर्वप्रथम त सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरु बलिया हुन जरुरी छ । त्यसमाथी हामी सबै संस्कारी बन्न जरुरी छ । नागरिक , संघस्ंस्था र सबै सरकार जनताप्रति अधिकतम उत्तरदायी बन्नु पर्ने पाठ यसले अझ बढी सिकायो । हामी सबै संस्कारी बन्नु पर्यो । ऐन नियम पालना गर्ने प्रवृति नहुदा समस्या धेरै छ । कुरा गर्ने तर काम नगर्ने प्रबृत्ति हटाएर अघि बढ्न यसले देशलाइ नै सिकाएको छ । हामी सबै सचेत बन्न र हरेक काम गर्ना व्यक्तिगत दुरि कायम गर्ने पाठ र हाम्रो धार्मिक संस्कृतिका कतिपय कुरा अहिले अझ महत्त्वपूर्ण सावित भएका छन् । यो समयले सिकाएको पाठ पनि यहि हो ।
९) समय दिनुभएकोमा धन्यवाद ।
– जननी नेपालले यस्तो महत्त्वपूर्ण घडिमा आफ्ना कुरा राख्न समय दिनुभएकोमा हजुरलाई पनि धन्यवाद । सामजिक दुरि कायम गर्यौ, स्वस्थ जीवनशैली अपनाऔ, महामारी बाट बच्ने सर्वोत्तम उपाय यहि नै हो । फेरि पनि आभार ।